काठमाडौंका रैथाने- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
चन्द्रागिरिको चोटीबाट काठमाडौं उपत्यकालाई नियाल्दा यसको भूस्वरुपमा को मोहित हुँदैन ? पृथ्वीनारायण शाहका कुरा बेग्लै भए । त्यसपछिका वर्णन कर्कप्याट्रिकले पनि छुटाएका छैनन् । उनले यस उपत्यकालाई एक विशाल रंगशालाका रुपमा देखे ।
श्रावण १०, २०७७ तीर्थबहादुर श्रेष्ठ
काठमाडौं उपत्यकाको रैथाने वन, वृक्ष र वनस्पतिको प्रसंगलाई कोट्याउँदा आजभन्दा झन्डै १२८ वर्षपहिले (सन् १८९३ डिसेम्बर) प्रकाशित प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि रड्यार्ड किप्लिङको नवप्रस्तर युग ‘नियोलिथिक एज’शीर्षकको कवितामा उल्लिखित काठमाडौंको सम्झनालाई ब्युँताउनु उचित हुन्छ  ।
अनुपम विश्वको वानस्पतिक वैभवलाई समेट्ने सपना बोकेको बेलायतको राजकीय वनस्पति उद्यान ‘क्यू’ को अतिरञ्जित सपना ‘वाइल्डेस्ट ड्रिम’ काठमाडौंको वास्तविक यथार्थ ‘फ्याक्ट्स अफ काठमाडौं’ हो भन्ने उद्गारले यस उपत्यकाको मौलिक विशेषतालाई उजागर गर्छ । किप्लिङका उक्त उद्गारका पछाडि कर्नेल विलियम कर्कप्याट्रिकको सन् १७९३ को नेपाल भ्रमण, फ्रान्सिस वच्नानन् ह्यामिल्टनको सन् १८०२–१८०३ को वनस्पति संकलन, डा. नाथानिल वालिचको सन् १८२०–१८२१ को वनस्पति सर्वेक्षण एवं सन् १८४८ मा डाल्टन हुकरको पूर्वी नेपाल सर्वेक्षणले स्थापित गरेको वैज्ञानिक आधारहरू मौजुद थिए ।
चन्द्रागिरिको चोटीबाट काठमाडौं उपत्यकालाई नियाल्दा यसको भूस्वरूपमा को मोहित हुँदैन ? पृथ्वीनारायण शाहका कुरा बेग्लै भए । त्यसपछिका वर्णन कर्कप्याट्रिकले पनि छुटाएका छैनन् । उनले यस उपत्यकालाई एक विशाल रंगशालाका रूपमा देखे । उर्वर खेत र बारीका दम्सिला पाटा र समथर पाटनहरू एक कान्लामाथि अर्को कान्ला थपिँदै शिवपुरीसम्म फैलिएको र त्यसको पछाडि हिमालयको हिमदृश्यले उनी मोहित थिए । उपत्यकाको ठाउँठाउँमा छरिएर बसेका घना बस्ती र सहरहरू तथा त्यहाँका अनगिन्ती मन्दिरहरूको स्पष्ट दृश्यले पनि उपत्यकाको शोभा बढाएको थियो । वरपरका हरियालीले गर्दा वस्तुतः काठमाडौं एक हरित प्याला थियो ।
आजभोलि काठमाडौंलाई सोही चन्द्रागिरिबाट नजर गर्‍यौं भने अधिकांश भूभाग सिमेन्ट र कंक्रिटको जमोठमा जकडिएको सुक्खा प्यालाजस्तो देखिन्छ । मन्दिरका गजुरहरू त्यसमा नै बिलाएका हुन्छन् । माटोको धर्ती कतै नजर हुँदैन । बाटाघाटाका रूखबिरुवाहरू एवं वाग–बगैंचाका शृंगार फूल वनस्पतिहरू अधिकांश बाहिरिया आयातित प्रजातिले छोपेको देखिन्छ । कहाँ गए काठमाडौंका रैथाने भूस्वरूप, प्राकृतिक सम्पदा एवं सांस्कृतिक धरोहरहरू ? चिन्ताका विषय धेरै छन् तर अहिले रैथाने रूखबिरुवाको बारेमा चर्चा गरौं ।
जीव–प्राणी एवं वनस्पतिको जैविक आधारमा हावापानी वा जलवायुको वर्गीकरण गर्दा काठमाडौं उपत्यकाको सतही भूभाग उप–उष्ण (सब–ट्रोपिकल जोन) कटिबन्धभित्र पर्न आउँछ । समुद्र सतहबाट १००० मिटरभन्दा उच्च र २००० मिटरभन्दा होचो भूभागमा उप–उष्ण जलवायु हुन्छ । काठमाडौंको सतही भूभाग १३०० मिटरदेखि १५०० मिटरको उचाइसम्म फैलिएको छ । यसको क्षेत्रफल लगभग ३२० वर्गकिलोमिटर नापिन्छ । उपत्यकाको चारैतिर हरियो पहाडको पर्खाल छ । ती पहाडका चुचुराहरू उत्तरतिर शिवपुरी (२७२५ मिटर) दक्षिणतिर फुल्चोकी (२७५५ मिटर), पूर्वमा नगरकोटको भ्युटावर क्षेत्र (२१९५ मिटर), पश्चिममा नागार्जुन जामाचो (२०९५ मिटर), दक्षिण–पश्चिमतिर चन्द्रागिरि (२४७५ मिटर) तथा चम्पादेवी (२२८५ मिटर) अवस्थित छन् । यी पहाडहरूले घेरिएको काठमाडौं उपत्यकाको पानीढलोले अन्दाजी ६५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्न पुग्छ । यी पहाडहरूको हावापानी शीतोष्ण (टेम्परेट) कटिबन्धभित्र पर्न आउँछ र त्यहाँका वन–वनस्पतिको भिन्नता पनि सोहीअनुरूप प्रतिविम्बित हुन्छ । यस लेखको दायरा भने उप–उष्ण काठमाडौंको सेरोफेरोभित्र सीमित राख्ने प्रयास गर्न चाहन्छु ।
काठमाडौंका रैथाने रूखहरूको चर्चा उठाउनुभन्दा पहिले हामी रूखलाई परिभाषित गर्न चाहन्छौं । किनभने ८० मिटरभन्दा अग्लो क्यालिफोर्नियाको जायन्ट सिकोया पनि रूख हो र हाम्रो बारीको ३ मिटर अग्लो भोगटे पनि रूख नै हो । ग्रीसको क्रिट टापुमा अवस्थित ३५०० वर्ष पुरानो जैतुनको बोट पनि रूख नै हो भने हाम्रो चक्रपथ छेउछाउमा भर्खर रोपिएका जाकारान्डा पनि रूख नै हुन् । वन तथा वनस्पतिक विद्यार्थीहरू त्यस्ता बिरुवालाई रूख वा वृक्ष भनेर मान्दछन्, जसको आफ्नै जरा प्रणालीले आफैंलाई मजबुत खडा राख्न सक्छ । र, धेरै वर्ष बाँच्न सक्छ । रूखको एउटा मात्र मूल खाँबो हुन्छ र त्यसले जमिनभन्दा माथि सुरिलो स्वरूप लिएपछि अरू हाँगाबिँगा पलाउँछन् । रूख मूलतः काष्ठपदार्थले बनेको हुन्छ ।
यस पृथ्वीको विशाल भूतलका ठाउँअनुसार विभिन्न प्रकारका हावापानी हुन्छन् । सोहीअनुरूप विभिन्न प्रकारका वन, वनस्पति एवं जीव–प्राणीहरू त्यहाँ स्थापित हुन्छन् । हावापानी र वातावरणको लामो अन्तरालपछि सोही वातावरण र हावापानीलाई प्रतिविम्बित गर्ने रैथाने वन, वृक्ष, वनस्पति एवं जीव–प्राणीको त्यहाँ विकास हुन्छ । र, एउटा निश्चित पारिस्थितिकीय प्रणाली स्थापना हुन्छ । नेपालमा यस्ता ११८ वटा पारिस्थितिकीय प्रणालीको पहिचान भएको छ । नेपालको कालीगण्डकी नदी र मेची नदीको बीचमा पर्ने भूखण्डमध्ये समुद्र सतहबाट १००० मिटरभन्दा उच्च र २००० मिटरभन्दा होचो भागमा पाइने चिलौने र कटुसको वनले उपउष्ण हावापानीलाई जनाउँछ । तसर्थ काठमाडौंको रैथाने वन–वनस्पति वा वृक्षको चर्चा गर्दा चिलौने र कटुस वनभित्र चहार्नु उचित हुन्छ । यस प्रकारको वनभित्र अरू १४० प्रजातिका रूखहरूको फेहरिस्त तयार हुन्छ । तिनका अतिरिक्त ११० प्रजातिका बुट्यान बिरुवा र ३० प्रजातिका लता प्रजाति पनि मौजुद छन् । घाँस, बाँस र तृणको लगत बाँकी नै छ ।
लुम्बिनी सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मभूमि भनेझैं हाम्रा वनस्पतिका वैज्ञानिक जन्मभूमि अर्थात् ‘टाइप लोकालिटी’ काठमाडौं प्रमाणित गर्ने थुप्रै रूखहरू छन् । सन् १८०२–१८०३ ताका ह्यामिल्टनले र सन् १८२०–१८२१ ताका वालिचले काठमाडौंबाट संकलन गरेका धेरै बिरुवाहरू विज्ञानका लागि नयाँ प्राप्ति ठहरिएका छन् । तिनका मौलिक नमुनाहरू बेलायतको ब्रिटिस म्युजियम तथा क्यू गार्डेनमा सुरक्षित छन् । तीमध्ये केही लोकप्रिय रूखबिरुवा प्रस्तुत गर्नुपरेमा चिलौने, मुसुरे कुटुस, लप्सी, लाँकुरी, उत्तिस, पैयुँ, काफल, मयल, वनचाँप, फ्लाँट, अंगेरी, पुवाँले आदिको फेहरिस्त बन्न सक्छ । चिलौनेको रूख सन् १८०२ मा स्वयम्भूको वनबाट ह्यामिल्टनले संकलन गरे र त्यसको वैज्ञानिक नाम पनि चिलोने नै भनेर प्रस्ताव गरे । पछिबाट अरू वैज्ञानिकहरूले वालिचको सन् १९२०/२१ को कामलाई सम्मान गरेर चिलौनेलाई ‘सिमा वाचिलाई’ भन्ने नाम स्थापित गरेका हुन् । चिलौनेको भूगोल नेपालबाट विस्तारित भएर भुटान, आसाम र पश्चिमी चीनसम्म फैलिएको छ । काठमाडौंबाट वनस्पति विज्ञानमा स्थापित यस्ता वृक्षहरूमध्ये होमालियम नेपालेन्स नामक वनस्पति नेपालको सिमानाभन्दा बाहिर कहीं पाइँदैन । यो रैथाने बिरुवा त्यस अर्थमा स्वस्थानीय ‘इन्डेमिक’ पनि कहलिन्छ ।
काठमाडौंका अरू रैथाने रूखहरूको फेहरिस्तमा १४० भन्दा बढी प्रजातिका रूखहरू मौजुद छन् । तीमध्ये केही लोकप्रिय प्रजातिको उल्लेख गर्नुपर्दा रानीसल्ला, च्युरी, रातो शिरीष, बकैनो, सिमल, खरी, ओखर, काउलो, गोगने, हाडेबयर आदिलाई बिर्सनु हुँदैन । यी विभिन्न रूखबिरुवाका स्रोत केन्द्रको रूपमा संरक्षण दिनुपर्ने स्थानहरू यसप्रकार छन्— चापागाउँको बज्रवाराही, गोदावरी एवं फुल्चोकी क्षेत्र, सूर्यविनायक क्षेत्र, चाँगुनारायण एवं नगरकोटका वनक्षेत्र, वज्रयोगिनी (साँखु) को नारायण वन क्षेत्र, गोकर्णको राजनिकुञ्ज वन परिसर, बूढानीलकण्ठ–शिवपुरी क्षेत्र, नागार्जुन–बालाजुको वनक्षेत्र, पशुपति वनकाली तथा स्वयम्भूका वनक्षेत्र । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका यी रैथाने वनक्षेत्र आजभोलि बाहिरिया आयाति ‘इक्जोटिक’ वनस्पतिको मिचाइमा पर्न थालेको छ ।
हाम्रो भूगोलभन्दा बाहिरका देश र महादेशहरू जस्तै अस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका, युरोप तथा अफ्रिकाबाट ल्याइएका विभिन्न रूखबिरुवाहरूले सर्वप्रथम राणा दरबारका वागबगैंचामा स्थान पाएका हुन् । टुँडिखेलजस्ता खुला क्षेत्रको वरिपरि अस्ट्रेलियाको युकालिप्टस्, कल्की फूल, काँगियोको रूख तथा युरोपतिरका लहरेपीपल (पप्पुलस) र चीन जापानतिरको जिंको सय डेढ सय वर्ष पहिलेदेखि नै भित्रिएको मानिन्छ । राणा दरबारहरूमा लोकप्रिय बन्दै आएको रूखकमल, जाकारान्डा, विदेशी धुपी (फुजा), काँडेसल्ला (मंकी पज्जल), बर्मेली सल्लो (क्रिप्टोमेरिया) आजभोलि पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ । हाम्रो परम्पराले थेगेको आफ्नै रूखबिरुवाहरू जस्तै : कपुर, बकैनो, वर, पीपल, पारिजात, असारे, खरी, सिप्लिकान, खोटेसल्ला, देवदार, लेकपाङ्ग्रो, कोइरालो, लप्सी आदि रैथाने वनस्पतिले सार्वजनिक ठाउँमा प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।
आजभोलिको काठमाडौं विशेषगरेर चक्रपथभित्रको सहरी क्षेत्रमा ब्राजिल र मेक्सिको फुल्ने गरेको छ । नीलो जाकारान्डा तथा हालसालै भित्रिएको पहेंलो विगुले फूल ‘तबेबुइया’ तथा लालुपाते र बैगनी बेली ‘बौगेनभिलिया’ काठमाडौंमा बहुलाएरै फुल्ने गरेको छ । काठमाडौंका वाग–बगैंचामा फुलाइने फूलहरूमा ९५ प्रतिशतभन्दा अधिक फूलका बिरुवाहरूको रैथाने खोज्न थाल्यौं भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको दक्षिणी भाग, मेक्सिको, दक्षिण अमेरिकी महादेश तथा क्यारेबियन टापुहरूतिर पुगिन्छ । आजभोलि काठमाडौंलगायत विभिन्न पहाडी क्षेत्रमा लोकप्रिय हुन थालेको एभोकाडो फलको रूख पनि यिनै क्षेत्रका रैथाने रूख हो । सिंहदरबारलगायत विभिन्न दरबारका रूखमध्ये रूखकमल ‘म्याग्नोलिया’ निकै टड्कारो देखिन्छ । यो बिरुवाको रैथाने संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सस र फ्लोरिडा तथा उत्तरी क्यारोलाइनासम्म फैलिएको छ । नेपाली म्याग्नोलियालाई चाँप भन्छौं । नेपालमा चाँपका दस प्रजाति पाइन्छन् । तर, तिनले आफ्नै बगैंचामा स्थान पाउन सकेका छैनन् ।
रूखबिरुवा र वनस्पतिको गौरवमय इतिहास बोकेको काठमाडौं उपत्यका परदेशी रूखबिरुवाको बिगबिगीमा परेर स्वस्थानीय परिचय गुमाउँदो छ । वर्तमान पिँढीलाई रैथाने रूखबिरुवाको नयाँ चेत सञ्चार गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन । नेपालको वनस्पतिबारे नेपाल सरकार वनस्पति विभाग एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय वनस्पति विभागबाट थुप्रै पुस्तकपुस्तिकाहरू प्रकाश भइसकेको छ । ती ज्ञान र विज्ञानलाई व्यावहारिक बनाउने प्रयासका कमी खट्किएको छ ।
वनस्पति विभागले आजभन्दा ५३ वर्षपहिले गोकर्ण वनका सम्पूर्ण वनस्पतिबारे पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो । यस्तै गरि फुल्चोकी गोदावरी (सन् १९८९), नागार्जुन (सन् १९७४) तथा काठमाडौं उपत्यका (सन् १९८६) को वनस्पति वैभव प्रकाशन भएका थिए । काठमाडौंको सहरी विकासमा तिनको भूमिका न्यून रह्यो । आजभोलि पनि काठमाडौं उपत्यकाको हरियाली र सौन्दर्य प्रवर्द्धन गर्ने काममा केन्द्रीय सरकार, नगरपालिकाहरू, गाउँपालिकाहरू तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू मिलेर अगाडि बढ्ने अवस्था बनेको छैन । यस उपत्यकाको प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्वरूपको मौलिकतालाई बचाइराख्न उपत्यका समन्वय संस्थाको खाँचो टड्कारो छ । प्रकाशित : श्रावण १०, २०७७ १०:३७
मेड इन वीरगन्ज
एउटा वृद्ध, आफ्नो बाल्यकाल र युवाकालको सहर खोज्दै हिँडिरहेको छ । कसरी भेटिन्छ ?
श्रावण ३, २०७७ ध्रुवचन्द्र गौतम
कहिलेकाहीं म सोच्दछु, म कुनै ब्रान्ड भएको भए, मलाई लेखिँदो हो- मेड इन वीरगन्ज । यो ठनाइ हो, मेरो वीरगन्जप्रतिको भावात्मक लगावको । यो एकदम अकारण छैन । केवल विशेषांक वा विशेष मौकाका लागि प्रयोजनीय हुनेगरी लेखेको पनि होइन । यो ‘फिलिङ’ हो, सुरुदेखि अन्त्यसम्मको । प्रसंग आयो, त्यही ‘फिलिङ’ अभिव्यक्त भयो ।
म आज केही हुँ वा छु वा हुन सकेको छु भने, सबमा वीरगन्जकै देन छ ।
मेरो पहिलो लेख वीरगन्जदेखि थालियो । आज म आफ्नो लेखनको सातौं दशकमा हिँडिरहेको छु भने, वीरगन्जबाटै उठेको सानो भुमरी यहाँसम्म आइपुगेको हो । भावात्मकताले अचेल पुग्दैन भने मेरो नागरिकता वीरगन्जकै छ । वीरगन्ज, पर्सा नै छ, लेखिएको मेरो ठेगाना । बम्बई, पुना वा काठमाडौंमै बस्दा होस्, म धेरै वीरगन्ज जान मन पराउने व्यक्तिमध्ये एक हुँ ।
पहिलो कविता मात्र होइन, आफ्नो पहिलो कथा, पहिलो गीत र पहिलो नाटक वीरगन्जमै लेखें । त्यहींदेखि थालूँ ।
वीरगन्जमा सरस्वती पूजा धुमधामले मनाइन्थ्यो । मूर्ति दरभंगाबाट ल्याइन्थ्यो । स्कुलमा ध्वजापताका सजाइन्ज्यो । अघिल्लो दिनदेखि नै सिमी छिल्ने, आलु काट्ने अथवा बसीबसी भोलिपल्टको भोजमा उपयोगी हुने काम छात्रहरू गर्थे, हाँस्दै–खेल्दै–गाउँदै :
जिसने कभी भी माड न पिया
वह मुरख काहेको जिया ।
जिसने न खाई राम तरोई
उसने जिन्दगी अपनी गँवाई ।
यस्तैयस्तै । यसमा छात्राहरू हुन्न थिए । छात्राहरू भोलिपल्टको भोजमा पसल बिछाएर थपीथपी ख्वाउनमा पूर्ण सक्रिय हुन्थे । तिनीहरू आफ्नो दुपट्टा जनैजस्तो तेर्सो लपेटेर, सलवार पिंडौलासम्म सारेर पहिले कहिल्यै नबोलेको छात्र–छात्रालाई पनि बेझिझक कर गरीगरी ख्वाउँथे । मलाई उनको त्यो रूप, दयालु र कोमल र अन्नपूर्णाजस्तो लाग्दथ्यो । सम्झँदा, अझै लाग्दछ ।
हाइस्कुल अर्थात् त्रि–जुद्ध हाई इंग्लिस स्कुलको तीन कक्षाको छात्र भएदेखि दससम्ममा हरसाल सरस्वती पूजा मलाई अत्यन्त विशेष लाग्दथ्यो, सबभन्दा भव्य । हाम्रो मूर्ति सबै स्कुल, रक्सौल हाइस्कुलभन्दा पनि राम्रो हुन्थ्यो । दुई दिन चल्ने महोत्सव थियो त्यो । भोलिपल्ट, विशाल जुलुसका साथ सिरसिया नदीमा मूर्ति सेलाउन लगिन्थ्यो :
सरस्वती माताकी जय
यी नारा लगाउँदा कहिलेकाहीँ नारा भट्याउनेको गला ‘रुँधेको’ पनि हुन्थ्यो । सेलाउने ठाउँ नजिक पुग्दा भावुकता झन् बढ्थ्यो । गला झन् रुँध्थ्यो, मूर्तिको अवसान हुन लाग्यो ।
सेलाएपछि प्रायः स्कुलमा पाँच दिनको छुट्टी घोषित गरिन्थ्यो, कुनै हेडमास्टरले कम गर्न चाह्यो भने, विद्यार्थी जोड गरेर पाँच दिन बनाइहाल्थे ।
सरस्वती पूजामा, दिनभरि त्यही दरभंगाबाट भाडामा ल्याएका त्यसबखतका हिन्दी फिल्मका रेकर्डहरू लाउडस्पिकरबाट घन्किरहन्थे । त्यसैको तालमा नभए पनि सुरमा म उछलकुद गरिरहन्थें । कैयौं सहपाठी हुन्थे मसित ।
अर्को झन् महत्त्वपूर्ण उत्साह थियो, बेलुकीको सांस्कृतिक कार्यक्रमको । कार्यक्रममा एउटा पूर्णांकी नाटक, विभिन्न प्रहसन र गीतहरू हुन्थे । हल त कहाँ पाउनु, स्कुलको खुला चउर नै दर्शकले खचाखच भरिएको हुन्थ्यो ।
मंडेश्वर, शंकरलाल जाटिया आदि राम्रा कमेडियन थिए ।
अलि पछि म पनि स्टेजमा गाउन थालें । गोपालजी नेपालीले मलाई त्यो मौका जुटाइदिएका थिए । मैले सुपेन्द्रका साथ एउटा युगल गीत गाएको थिएँ, ‘आजाद’ फिल्मको :
कितना हँसी है मौसम
कितना हँसी सफर है,
साथी है खुबसुरत
ये मौसम को भी खबर है ।
यही मेरो पहिलो सार्वजनिक अथवा स्टेज पर्फमेन्स थियो ।
सुपेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ मभन्दा राम्रो गाउँथ्यो । उसले फिमेल स्वरको प्रतिनिधित्व गरेको थियो, मैले मेलेको । आवाज दुवैको पातलो थियो । यी सबको तारतम्य, पछिसम्म संगीत विभागको जिम्मा समालेका भरत दाइ र हरि दाइले मिलाउँथे । भरत दाइ हार्मोनियम र ढोलक बजाउँथे । लक्ष्मण, झन् उत्साहले बजाउँथ्यो । उसले ढोलक बजाएको मलाई सुन्न मजा लाग्दथ्यो । गीत चल्तीको छ भने ऊ झन् मच्चिएर आफ्नो कला देखाउँथ्यो । मलाई उसले ढोलक बजाएको अझै याद छ ।
त्यही ‘पर्फमेन्स’ का साथ, भोलिपल्टदेखि वीरगन्जमा म चिनिन थालें, कलाकारका रूपमा । गायनमा पुरस्कार त्यहाँ मैले कहिल्यै पाइनँ तर मेरा प्रशंसक भने निकै मानिस बने । कति वर्षपछि मैले मेरी श्रीमतीकी दुइटी साथीकी आमासित भेटें, जो मेरै ‘अथेन्टिक फ्यान’ रहिछन् तिनताक । ती आफ्नो घरनजिकको कार्यक्रम छाडेर आउँथिन् । छोराछोरीको भनाइ थियो, ‘यो आमा आँधी–पानी जे आए पनि, सब काम छोडेर हाइस्कुलको कार्यक्रम हेर्न जान्थ्यो, खालि ध्रुवचन्द्र दाइको गीत सुन्न ।’ यस्ता केही अरू पनि थिए, विस्तारमा नजाऊँ । दर्शक/श्रोताको त्यो ‘वाहवाही’ नै मेरो इनाम हुन्थ्यो ।
अब वीरगन्ज यति विकसित छ कि मलाई, पुराना गल्लीहरू चिन्न र आफू हिँडेका त्यसबखतका ठाउँ पहिल्याउन लगभग असम्भवजस्तै छ ।
धेरै वर्षपछि म लेखनमा लागेर ‘मदन पुरस्कार’ पाएपछि, वीरगन्जमा मेरो पुरानो एउटा सहपाठी भेट भयो । भन्यो, ‘तुम तो पहले बहुत एक्टिभ थे, उतना अच्छा गाते थे, अब क्या हो गया सब ?’
म के भन्थें, मुसुक्क हाँसेर, ‘ऐसा ही है’ भनेर हिँडें । त्यसबखतका यी सम्झनाहरू मूल्यवान छन् । सारा वीरगन्ज मलाई चिन्थ्यो मात्र होइन, माया पनि गर्थ्यो । केही समयपछि, एक वर्ष मैले गाइनँ, सम्भवतः ०१५ सालमा । आवाजमा परिवर्तन आउँदै थियो मेरो ।
मोटो र मसिनो स्वरको मिश्रण हुन थालेको थियो ।
०१६ सालमा मैले एउटा मौलिक नेपाली गीत लेखेर वीरगन्जको त्यही स्टेजमा गाएँ । धुन पनि मेरो, शब्द पनि मेरो :
मनमा राखी तिमीलाई
म तिम्रो पूजा गरूँला ।
यो एउटा लामो, छ स्टेन्जाको गीत थियो । बिनासंगीत गाइएको । तैपनि श्रोताले मन्त्रमुग्ध भएर सुनेपछि म निकै उत्साही भएँ । पछि अन्य कैयौं मौलिक गीत लेखें र बिनाबाजा–ढोलक गाएँ । सबैलाई त्यही मन पर्‍यो । केटा र केटी पनि ती मेरा मौलिक नेपाली गीतहरू गाउन थाले । त्यो पनि मेरो जीवनको पहिलो घटना थियो ।
०१८ सालमा, मैले एउटा नाटक लेख्न चाहें, लेखें । तर, त्यसमा समस्या के थियो भने, स्त्री पात्र पाइन असम्भवजस्तै थियो । पाइँदा पनि हुन् । तर कति अघि एक नाटकमा बहिनी बनाइएकी नायिका, वास्तविक जीवनमै नायकसँग हिँडिदिएपछि, केटीहरू ‘हच्के’ !
मैले के मनमा आएर हो भनिदिएँ, ‘केटीहरू खेल्छन् भने, म एउटा केटीकेटी मात्र पात्र भएको नाटक लेख्छु ।’
के लेख्छु, त्यो मलाई ज्ञान थिएन, आँटचाहिँ थियो । केटीहरूले आ–आफ्नो घरघरमा सोधे । लगभग एक दर्जन केटीहरूले खेल्न माने ।
म उत्साही भएँ । विषयवस्तुदेखि लेखनसम्म, कुमालटोलको छतमा बसेर चार घण्टामा सकें ।
एउटा नाटक सकें । नाउँ राखें, ‘पिकनिक’ । धेरै नभनूँ । त्यसमा आयोजकहरू यति सजग थिए कि सुरक्षाको दृष्टिले होला, कतैकतै कार्यक्रमको टाँस्ने गरेको पोस्टर पनि त्यस वर्ष टाँसिएन । तर, तैपनि, ‘माउथ पब्लिसिटी’ ले होला, दर्शक यति आए, जसलाई ‘नभूतो नभविष्यति’ यसमा चाहिँ निर्धक्क भन्न सक्छु । वीरगन्जको सांस्कृतिक कार्यक्रममा न त्यति दर्शक पहिले कहिल्यै जम्मा भएका थिए न पछि, कहिल्यै भए । त्यत्रो चउरमा नअटाएर पर्खाल, रूख, जहाँबाट मिल्यो, हेरे, नाटक मन पराए पनि त्यत्तिकै । आकर्षण पनि हुँदो हो, केटीकेटीले खेल्ने नाटक ? वीरगन्जमा पहिलो घटना थियो नि त ! ती नयाँ केटीहरूले पनि सोचेभन्दा राम्रो अभिनय गरे । मसमेत, स्व. बलरामसिं मल्ल र मणिराम निर्देशक थियौं । म केटीहरूलाई रिहर्सलमा अभिनय सिकाउँथें पनि । ‘पिकनिक’ खेल्ने वा हेर्नेको स्मृतिमा होला, तर अब त्यसको अस्तित्व इतिहासको गर्भमा छ । मलाई अझै ताजा किन छ भने, त्यही मैले लेखेको
आफ्नो जीवनको पहिलो नाटक थियो । त्यो अप्रकाशितै रहे पनि मनमा प्रकाशित छ ।
दसैंमा माईस्थानको मेला अष्टमीका दिन लाग्दथ्यो । त्यसो त नवरात्रभरि, ब्राह्म मुहूर्तदेखि नै पशुपति उस्तादको हार्मोनियममा बज्न थालेको ‘भैरवी’ ले मलाई सधैं तानिरहेको हुन्थ्यो । त्यो सुन्नु अत्यन्त आकर्षक लाग्दथ्यो । भजन गाइन्थ्यो । मेलाको दिन रक्सौलदेखि नै स्त्री–पुरुषको लर्को अटुट लागेको हुन्थ्यो । म नयाँ सिलाएको कमिज–पाइजामा शीत लाग्छ कि भनेर बेलोबलामा, अलिकति पाइजामा मास्तिर सर्काउँदै हिँड्थें । खल्तीमा एकमोर–दुवन्नी–चवन्नीसम्म छ भने सिटी, डुगी, फुकौना, लामो खरिदारी हुन्थ्यो मेरो । घर पुग्दा खेलौनाले ‘लदाफँदा’ पुग्थें । केही टुटफुट पनि भइसकेको हुन्थ्यो ।
छठपर्वको मेला घडिअर्वा पोखरीको छेउमा लाग्दथ्यो । आजको जस्तो भव्य सूर्य–रथ त्यसबखत थिएन, तर त्यो ‘प्रबनी’ सबभन्दा पवित्र लाग्दथ्यो । त्यसपछि ठेकुवा पर्सादी खान पाइन्थ्यो, जुन मलाई आज पनि मीठो लाग्दछ ।
हामी घुम्ने अर्को एउटा मुख्य ठाउँ थियो वीरगन्ज रेल्वे स्टेसन । रेल चढ्ने र छुट्नेहरूमा परिचित पनि भेटिँदा रमाइलो हुन्थ्यो । रेल हिँडेको, थामिएको, इन्जिनले पानी ख्वाएको हेर्नु मलाई रमाइलो लाग्दथ्यो । कहिलेकाहीं, हामी केटाकेटी कुमालटोलका युवाहरूको समूहमा रक्सौल, ‘कृष्णा टाकिज’ सिनेमा हेर्न यही रेल, एनजीआरमा पनि जान्थ्यौं, डब्लूटी गएर पक्डाउने डरले, एउटा मोडमा रेलको गति कम हुन्थ्यो, त्यही मौकामा, यति यात्रु ओर्लन्थे कि, कहिलेकाहीं त रेल लगभग रित्तिएर पुग्थ्यो रेल्वे स्टेसन ।
वीरगन्ज, मैले थाहा पाएदेखि नै नगरपालिका थियो । त्रिजुद्ध स्कुल एक मात्र हाइस्कुल थियो त्यताको, जसका विद्यार्थी एसएलसी बोर्डमा, प्रथम पनि भइरहन्थे । बोर्डमा दसमा आउने त धेरै हुन्थे ।
सडक तीन भागमा बाँडिएको थियो, जसलाई फर्स्ट, सेकेन्ड र तेस्रो जिनतिन थर्ड रोल भनिन्थ्यो । फर्स्ट रोड नै पनि ग्राबेलको थियो, जसमा बेलाबखत सडक सम्याउन रोलर चलिरहन्थ्यो । त्यसलाई हेर्न पनि उत्सुक रहन्थें । तिसरी घण्टीतिर आउँथ्यो, सिनेमाको विज्ञापन, एउटा टिनको ढ्वाङ मुखमा टाँसेर लंगडा खोच्याउँदै कराउँथ्यो, ‘आज की रात देखिए कीर्ति सिनेमा के रुपहले पर्दे पर मुनरिया का छमछम डान्स...।’ यस्तैयस्तै । यसलाई त म कुरिरहन्थें । एउटा केटो सिनेमाको पोस्टर बोकेर हिँड्थ्यो । त्यो हेर्न र लंगडाको पुकारको विशेष शैली सुन्न मलाई मन पर्थ्यो । क्लासमा पढाइरहेको ‘माडसाप’ आफ्नो ठाउँमा थियो । पढाइमा त ध्यान जानु थियो, न जान्थ्यो ।
अहिले त वीरगन्ज उपमहानगरपालिका हुँदै, महानगरपालिका नै भएको छ । अब वीरगन्ज यति विकसित छ कि मलाई, पुराना गल्लीहरू चिन्न र आफू हिँडेका त्यसबखतका ठाउँहरू पहिल्याउन लगभग असम्भवजस्तै छ, आफैंलाई अलि हास्यास्पदजस्तो पनि लाग्दछ । एउटा वृद्ध, आफ्नो बाल्यकाल र युवाकालको सहर खोज्दै हिँडिरहेको छ । कसरी भेटिन्छ ?
केही पुराना मानिस भेटिन्छन्, जस्तो मेरै सहपाठी परशुराम सरावगी, तुलेन्द्र, सुपेन्द्र आदि । पुरस्कार नपाए पनि सान्त्वना पुरस्कार त हो नै पुराना साथीभाइ र केही अवेशष भए पनि आफ्नो बेलाका सडक गल्लीहरू भेटिनु । पहिलेभन्दा वीरगन्ज मौलिक मात्र होइन, बौद्धिक रूपमा पनि विकसित भएको छ । पत्रकारितामा र साहित्यमा पनि । खेलकुदमा वीरगन्ज पहिलेदेखि नै सक्रिय हो । उहिल्यैदेखि ‘ब्यारेक ग्राउन्ड’ मा फुटबल आदिको आयोजना हुन्थ्यो । कति मेरा प्रिय फुटबलर थिए । तिनमा रूपालशमशेर त अब्बल दर्जाका राष्ट्रिय खेलाडी भए ।
अहिले मेरो वीरगन्जमा कोही पनि छैन त भन्दिनँ, दाइहरूको परिवार त्यहीं छ, बेलाबेलामा गइरहन्छु । केही पुराना साथीभाइ भेटिन्छन्, सहरका पुराना अवशेष भेटिन्छन् । तर, केही पनि हैनचाहिँ भन्न सक्छु ः ‘रहने को घर नहीं है/सारा जहाँ हमारा’ भनेजस्तै । तर, एउटा कुरा फेरि यति तगडा रूपमा छ कि, त्यसले मलाई वीरगन्जसँग सधैं जोड्छ । स्मृति, जुन कसैले खोस्दैन, चोर्दैन, हर्दैन तर यसैभित्र छ, वीरगन्जबाट मैले पाएका देनहरूको संग्रहालय पहिलेको हाइस्कुलको चउरको दर्शक जत्तिकै खचाखच भरिएको ।
यसरी भइएन त : मेड इन वीरगन्ज ?
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७७ ११:२६